Maitiro ekurapa hutachiona kubva kuLinux | Kubva kuLinux
Maitiro ekurapa hutachiona kubva kuLinux
Shamwari Mukenio anotinyevera iyo F-Yakachengeteka inopa knoppix-yakavakirwa live-cd kubvisa chero malware aungave iwe mune ako windows kuisirwa. Kushandiswa kwaro kuri nyore, iyo live-cd yakaiswa, inotsvaga zvekuvandudzwa kubva kuUSB kana internet uye zvobva zvaenderera kuongorora chikamu / dhisiki nema windows.
Unogona kudhawunirodha inorarama cd kubva ku aca (118 MB). Iyo Zip, iwe unzip iyo uye mukati mune iyo ISO mufananidzo.
Wobva wapisa ISO kuCD kana USB uchishandisa UnetBootin uye bhuti.
Kamwe bhuti parakapera, chino chenjedzo chinoonekwa
Zvino edza kugadzirisa kubva pa internet kana kubva pendrive
Kana iko kugadzirisa kwapera, runyorwa rwezvikamu zvinofanirwa kuongororwa zvinoratidzwa
Paunenge wasarudza zvekutarisa zvinoratidza kufambira mberi
Uye pakupedzisira, ratidza mushumo wekupedzisira
Ikoko unayo, Linux kuchengetedza Windows.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » FileLet's UseLinux » Maitiro ekurapa hutachiona kubva kuLinux
Chaizvoizvo ... asi hei, isu tichafanirwa kuyedza, pamwe zvinokuchengetedza munguva yekushayiwa
Dambudziko nderekuti rakanaka sei chaizvo, nekuti kunyangwe iyo "yakanyanya antivirus" pamusika haigone kuchenesa ese kana mazhinji mavhairasi.
Pindura kuna Dave
Ndatenda, kunyangwe ino June 5 ini ndichapemberera nekuisa Ubuntu.
Ini ndinogara ndichishandisa live cd kutanga mawindows masystem anondiunza kumusangano (ubuntu) uye ikozvino ndichaedza chishandiso ichi kubvira kubvira pandakaverenga bhuku rekutanga relinux (Anaya) rakavhura pfungwa dzangu maererano nezvinhu zvinoverengeka zvavari shanduka kuve mabhenefiti kune vatengi uye nekudaro, vatengi vazhinji Ndatenda.
Izvo hazvindibhabhise, ini ndashandisa unetbootin, ini ndadzokororazve uye kuyedza muiyo bios nezvose zvinogoneka boot zvigadziriso zveUSB uye hapana chinoitika.
Juan Pedro Lardet akadaro
pandinovhura chinongedzo, chinonditumira ku https://www.f-secure.com/en/web/labs_global/tools-beta uye munzvimbo ino handizive chandinofanira kutora.
Pindura kuna juan pedro lardet
Maitiro ekugadzira gallery yekutora kubva muvhidhiyo